Umklamo ka-Lewandowski ubulala iphupho likaPitso | Scrolla Izindaba
Umklamo ka-Lewandowski ubulala iphupho likaPitso
Amagoli amabili kaRobert Lewandowski anikeze i-Bayern Munich indawo kowamanqamu we-FIFA Club World Cup. Ompetha base-Germany manje bazobhekana nompetha base-Mexico i-Tigers UANL kowamanqamu ngoLwesine e-Education City Stadium e-Doha, e-Qatar.
NgoMsombuluko ebusuku i-German ihlule ompetha base-Egypt i-AL Ahly ngamagoli amabili eqandeni e-Ahmad Bin Ali Stadium ukuze babeke usuku nabase-Mexico. ULewandowski, ophethe i-World Player yonyaka ngowezi-2020, ushaye amagoli kuzo zombili iziwombe ukuhola i-European Champions komunye futhi umdlalo wamanqamu omkhulu.
Lo mgadli waba ngumdlali wokuqala ngqa wase-Poland ukudlala nokushaya amagoli ku-Club World Cup.
Yize amaJalimane ayeyizintandokazi ukunqoba edlala ne-Ahly ama-Afrika aziphendulela kahle. Bathathe umdlalo baya e-Bayern kanti abadlali be-Ahly bazobamba amakhanda abo phezulu bathi okungenani abaphoxwanga njengeBarcelona ehlulwe ngamagoli ayisishiyagalombili kwamabili yiqembu elifanayo.
Amehlo ayethe njo kumqeqeshi uPitso Mosimane ohole izidlakela zase-Egypt ukuthi ziphinde zidlale enye imidlalo ye-Club World Cup. Lokhu kungukubonakala kwesithupha kwama-Red Devils emncintiswaneni futhi babezimisele ngokwenza kangcono kakhulu.
Ngowezi-2006 baqeda endaweni yesithathu futhi bangalinganisa izibalo uma bengakwazi ukushaya ijezi lase-Brazil i-Palmeiras endaweni yesithathu neyesine ngoLwesine. Ngaphambi kwalo mdlalo uMosimane, owahola i-Mamelodi Sundowns kulo mqhudelwano ofanayo ngowezi-2016, uthe ulindele ukuthi abadlali bakhe bazijabulise.
Abadlali bakhe bakwenze kahle lokho futhi ukuhlulwa ngamagoli amabili eqandeni kufanele kunikeze uMosimane isikhuthazo lapho iqembu lakhe liqala kabusha ukuvikela isicoco se-Egypt. Umdlalo abazowudlala nama-Brazilians uzoba se-Education City Stadium ngo-5 ntambama kanti uzosebenza njengovula amakhethini kumdlalo wamanqamu ozoqala ngo-8 ebusuku.
Umthombo wesithombe: @africasoccerzone